Qaybta u 1.Is suurtagal ah in la soo celiyo ee files tirtiray ka your computer?
Qaybta 2.Things daryeel ah ka hor soo kabsaday files tirtiray
Qaybta 3.How inuu ka soo kabsado files tirtiray on Windows (la Wondershare Data Recovery)
Qaybta 4.How inuu ka soo kabsado files tirtiray on Mac (la Wondershare Data Recovery)
Qaybta 5.What in la sameeyo ka dib dib u soo celinta ee files tirtiray iyo sida looga fogaado khasaare xogta by tirtirka shil
Dhaco tirka files muhiim on your computer ma ahan wax cusub oo ugu naga mid ah. Dhab ahaantii, waxaa ay noqon doontaa mid aad u yar oo naga mid ah oo aan lahaa, islamarkaana la tirtiro faylka ama laba ku suganyihiin baadi halka isticmaalaya computer ah oo kaliya. Tani waxay run heysta inta badan u isticmaala si joogto ah computer, labada Windows iyo Mac.
Qaybta 1aad suuragal u tahay in la soo celiyo ee files tirtiray ka your computer?
Haa, aad maqasheen waa xaq, waxaa suuragal ah in aad ka bogsato oo soo celiyo files tirtiray ka your computer. Sababta sababta aad mar walba soo kaban karto, files kuwan waxaa ugu wacan inay yihiin marna runtii u dhameystirtay saaro your computer.
Marka aad tirtirto file ah, habka kaliya ee ka saaraysaa rin in farta ku wajahan qaybaha ku wadid aad u adag halka macluumaadka asalka ahaa ee la kaydiyo. Oo sidaas taas oo fiiri sida haddii faylka ayaa laga saaray your computer. Si kastaba ha ahaatee, sida xaqiiqada ah, file wuxuu weli ka jiraa qaybta in oo sii wadi doona in ay sidaa sameeyaan ilaa computer markii aanu iyaga overwrite la kalena cusub ee xogta.
Sidaas, haddii aad deg deg ah oo ku filan, waxaad hubaal soo kaban karto, aad files lumay iyadoo la kaashanayo qalabka saxda ah.
Part 2 Waxyaabaha ay daryeelka ka hor soo kabsaday files tirtiray
Halkan waxaa ku qoran liiska degdeg ah oo wax ah waa in aad is ogow of hor inta aanad bilaabin ka shaqeeya soo kabsaday faylasha tirtiray on your computer.
• dhaco tirtiray in file muhiim ah, si deg deg ah loo joojiyo shaqeeya on your computer! Tan iyo markii, la tirtiro file ah oo keliya computer sheegayaa in xogta lagu kaydiyaa file in aan loo baahnayn, waxa ay haatan u diyaar u yahay inuu qoro xogta cusub ee hogaanka waxaa ka mid ah oo aad rabto in. Sidaas, joojin Kombuyuutarada oo dhan oo ay ka fogaadaan wax badbaadiya dambe shaqeeyaan ilaa aad ka heli file in la tirtiro.
• Hel software kabashada midig ama barnaamijka sida iyada oo, soo kabashada ee files lumay ma noqon doono sidii guul sida aad rabto in aad lahayd inuu noqdo. Maalmahan, waxaa jira fursado badan oo la heli karo magaca kabashada xogta si kastaba ha ahaatee waxaa jira oo kaliya aad u yar oo ah in si dhab ah samayn kartaa qaar ka mid ah shaqo lagu kalsoonaan karo xagga dambe oo dhawrsan aad helitaanka faylasha aad.
Part 3 Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray on Windows (la Wondershare Data Recovery)
Wondershare Data Recovery waa xal weyn u ah kuwa raadinaya inay ka soo kabsadaan xogta lumay ay sabab u sabab kasta. Software Tani soo kaban karto, iyo soo celiyo ee files lumay hab aad u fudud oo aan khatar ah. Waxaa si toos ah uu baaritaanku your computer ee files si qalad ah tirtiray oo la shaqeeya dhammaan noocyada kala duwan oo ka mid ah sida sawirada, videos, music, emails, waraaqaha iwm
Download software cajiibka ah adigoo gujinaya halkan oo ku xidh on your computer. Markaas si fudud raac tallaabooyinka sida hoos ku siiyo.
Dooro habka soo kabasho - Marka la bilaabay Wondershare Data Recovery, waxaad arki doontaa in ay bixisaa 4 hababka soo kabashada kala duwan. Fadlan dooro ikhtiyaarka oo oranaya 'lumay Recovery File' si ay u bilaabaan.
Sida ugu dhakhsaha badan ee aad riix qaybta 'lumay Recovery File', software-ka waa in ay muujiyaan oo dhan drives on your computer. Dooro mid aad rabto in aad soo kabsado faylasha tirtiray ka guji badhanka 'Start'.
Hadda, software-ka waa in lagu bilaabaa baar drive aad dooratay. Sug natiijada taas waa in aysan qaadan wax ka badan dhowr ilbiriqsi.
Marka iskaanka waa dhameystiran, software tusi doonaa liiska faylasha in la soo kabsaday karo ama dib loo soo celiyo ee qaybaha Nooca File iyo Jidka. By default dhammaan faylasha waxaa lagu soo xulay iyo sidoo kale waxaad iyaga ku eegaan kartaa mid mid. Waxaad markaa deselect karaan kuwa aad Ma rabo inuu ka soo kabsado oo riix badhanka soo kabsado in ay iyagii u badbaadiyey in your computer.
Qeybta 4 Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray on Mac (la Wondershare Data Recovery)
Download Wondershare Data Recovery for Mac adigoo gujinaya halkan ka dibna ku xidh. Marka la rakibo dhamaato, abuurtaan software ka dooro hab dib u soo kabashada 'lumay Recovery File ".
Hadda, waxaa la gaaray waqtigii ay u doortaan drive meesha aad tirtiray faylasha. Markaas riix 'Scan' si ay u bilaabaan iyagoo raadinaya iyaga.
Marka software ayaa ku dhameysatay kaalinta iskaanka, waa in aad aragto liiska dhammaan faylasha in la soo kabsaday karo, soo bandhigay for Kulanka Xiisaha Leh. Dooro kuwa aad jeclaan lahayd inay ka soo kabsadaan oo ka dhacay badhanka 'Ladnaansho' in ay iyagii u badbaadiyey on your Mac. Xusuusnow in uu badbaadiyo files kuwaas oo drive kale si aadan aakhirka overwriting faylasha isla baad inuu ka soo kabsado.
Qeybta 5 Maxaa la sameeyaa ka dib markii ay dib u soo celinta ee files tirtiray iyo sida looga fogaado khasaare xogta by tirtirka shil
Waa hagaag, hadda in aad soo celiyo files aad, waxaan si xoog leh u soo jeedin in aad arimo dhowr ah sameeyaan si looga fogaado wax khasaare dheeri ah oo xogta ay sabab u tahay sababo ay ka mid yihiin tirtirka shil.
Halkaan waxa ay kala yihiin:
• Ka taxadar halka tirka files aan la rabin, in la hubiyo in file ku saabsan in ay tirtirto aad tahay inuu runtii yahay mid ka mid ah oo aan aad u baahan tahay
• waxaa Caado ka dhigo in la abuuro hayaan. Waxaad isticmaali kartaa ah drive dibadda adag tahay tan iyo xitaa halka nadiifinta your computer, xajisto dhammaan faylasha ee dambe.
• Hel ah xogta qalab kabashada cajiib ah oo aadka loo qiimeeyo ee naftaada sida ugu Wondershare Data Recovery software si haddii aad waligaa isku ahaayeen iyagoo ku dambayn doonaan in xaalad la mid ah, waxa aad si fudud u soo celin kartaa files lumay.
> Resource > Mac > Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray on Windows iyo Mac